Nyanzvi Alibaba Kupisa Zvigadzirwa Bargain Kutengesa Polyester MuPillow vagadziri | Rayson
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China Main zvigadzirwa Nyanzvi Alibaba Kupisa Zvigadzirwa Bargain Kutengesa Polyester MuPillow vagadziri
Hunhu hwaRayson hunovimbiswa. Maitiro ayo ekugadzira anotarisa kuchengetedzeka kwevatengi nekuona kutevedza nemazinga ekuchengetedza panguva yekugadzirisa
Rayson Global Co, Ltd mubatanidzwa weSino-US, yakavambwa muna 2007 iyo iri muShishan Town, Foshan High-Tec
Vatengi vanoda kuziva zvakawanda nezve yedu nyowani chigadzirwa kana kambani yedu, taura nesu chete. Zvakare, kuendesa kwedu kuri panguva uye kunogona kusangana nezvinodiwa zvevatengi vese. Mushure memakore ekuvandudza, isu tasimbisa kwenguva refu kudyidzana hukama nevatengi vedu pasirese. Ndokumbirawo uve nechokwadi chekuti tine kodzero yekutengesa zvigadzirwa zvedu uye hapazove nekukuvara kwakaitika kune izvo zvakaunzwa zvinhu. Isu tinogamuchira nemoyo wese kubvunza kwako uye kufona.
Matiresi yako inofanira kugara kwenguva yakareba sei? Matiresi yega yega yakasiyana. Ukakanda husiku kana kumuka uchirwadziwa inguva yekuwana matiresi nyowani zvisinei nezera rayo. Tinokurudzira kutarisa mutemo wemutemo uye kutsiva angangoita ese makore masere.Ndingawana sei mamwe masampuli？ Mushure mekusimbisa chipo chedu uye titumirei sampu yemutengo, tichapedzisa sampuro mukati memazuva gumi neshanu. Iwe unogona kukumbira iyo yakajeka kambani kuti itore iyo sampuro kubva kukambani yedu kana iwe unogona kuti titumire DHL, FedEx kana UPS kuunganidza nhamba account, tinogona kutumira iyo sampuro kwauri neakaunzi yako. Hongu, tinogamuchirwa kuti tishanyire fekitori yedu chero nguva, isu tiri padyo neGuangzhou Baiyun nhandare yenyika, zvinongotora awa imwe nemotokari, uye tinogona kuronga mota kukusimudza.